Halkee laga helaa Unugyada Microstation - Geofumadas
Halkee laga helaa Unugyada Microstation
Maarso, 2008 Microstation-Bentley
Qaar waxay ku magacaabaan unugyo, magaca waa unugyo waxayna u dhigantaa qaybo ka mid ah AutoCAD. Muuqaal hore waxaan arkeynay meesha laga soo dejiyey Blocks for AutoCAD, iyo sida loo bedelayo faylashaas fure .cel illaa AutoCAD blocks.
Haatan aan aragno meesha laga soo dejisan karo unugyada: Waxaa jira dhowr goobood, halkaas oo aad ka heli karto khayraadyo sida:
Kuwa kale, waxay bixiyaan feylo-yaal kale oo kala duwan, laakiin meesha ugu muhiimsan ee lagu helo in la helo unugyada waxay ku taal bogga rasmiga ah ee Bentley Systems, ee Bentley Select Library oo loo yaqaan Bentley Library.
Meesha xiisaha, luuqada iyo nooca khayraadka ee loo baahan yahay waa la xushay.
Si aad fikrad u leedahay, waxaan doortay suuqa: "Dhismaha", nooca khayraadka: "unug" iyo luqadda Isbaanishka waana tan natiijada:
sillas.cel - noocyada kala duwan ee kuraasta, saxarada iyo kuraasta.
coches.cel - baabuur (Porsche)
unugyada dhismaha - dhismayaasha dhaadheer, gawaarida, salka, guluubka dabka, iwm.
mesas.cel - miisaska kala duwan, miisaska kafeega, miisaska, miisaska sariirta, iwm.
qolka qolka hurdiga ah - noocyo kala duwan oo sariirood ah, dharka xarkaha, xargaha, iwm.
alaabta guriga - alaabta sare, modules hoose iyo kan sare, saxanka, foornada, daboolka wax soo saarka, bulaacadaha, baararka iyo saxarada, iwm.
Meelaha xafiisyada xafiisyada - Miisaska, kombiyuutarrada, kuraasta, alaabta guriga iyo waraaqaha xayeysiiska, iwm.
alaabta guriga lagu raaxeysto - qolka kuraasta, kuraasta kuraasta, kuraasta kuraasta leh, muraayadaha, miisaska kafeega, daaqadaha dhinacyada iwm.
furniture.cel - piyanos, miisaska pool, TV'yada, sheekada, nalalka, rahamka, iwm.
plantas.cel - noocyada kala duwan ee dhirta, dhirta, xarumaha ubaxa iyo dheriyada, dusha sare, iwm.
albaabka knobs.cel - noocyada albaabbada iyo albaabada iyo daaqadaha
varios.cel - qolka kuraasta, miisaska, miisaska, roogagga, shooladaha, saxanka, bullaacadaha, foornada, daboolka wax lagu karsado, qolalka jikada, sariiraha hal mar ama laba dabacsan, radiators, iwm.
Musqusha iyo musqulaha
musqulaha musqusha. - Dhaqdhaqaaqyo dhaadheer, hooseeya, modules sare iyo roog
bathtubs.cel - noocyada kala duwan ee musqusha
baño.cel - qasabadaha casriga ah iyo musqulaha casriga ah
bidets.cel - noocyada kala duwan ee barkadaha
WC.cel cabin - noocyo kala duwan ee musqusha
duchas.cel - noocyada kala duwan ee tirooyinka dabka iyo muraayadaha qubeyska
mirrors.cel - noocyada kala duwan ee muraayadaha
instalaciones-plutaneria.cel - musqulaha / qasabadaha for washbasins, musqusha iyo dabaasha
lavabos.cel - noocyada kala duwan ee lagu maydho
radiadores.cel - noocyada kala duwan ee radiators iyo shukumaannada shukumaanka
Nidaamyada nalalka ah - noocyada kala duwan ee darbiga, sagxadda dhulka iyo saqafka
urinarios.cel - noocyo kala duwan oo kaadi ah
WC.cel - Noocyada kala duwan ee WCs
accessories salon - TV, qalabka hifi, ciyaartoyda fiidiyowga, kuwa ku hadla iyo qalabka jirdhiska
applyads - noocyada kala duwan ee laydhka / laydhka
sillas.cel - miisaska iyo saxarada
candelabros.cel - laba shamaad
shaybaarka - noocyada kala duwan ee shooladaha
qalabka xafiisyada - telefoonada, fakiska, kombiyuutarrada, daabacadaha, sawirqaadayaasha, sawir qaadayaasha, iwm.
lamps.cel - noocyada kala duwan ee laydhka dhulka
lamps.cel - noocyada kala duwan ee nalalka miiska
saqafka lamps.cel - noocyada kala duwan ee nalalka saqafka iyo nalalka
miisaska centro.cel - miisaska kala duwan iyo miisaska kafeega
office.cel furniture - noocyada kala duwan ee alaab-shaqeynta xafiiska, sida sarkaalka, dharka, shooladaha iyo miiska cuntada oo leh kuraasta
Xafiisyada Xafiiska Masraxiyada - Kumbuyuutarada Miisaska, miisaska, kursiyada, roogagga iyo roogagga, xarigaha xargaha, iwm.
muraayadaha fardaha saldhigyada - roogaga, alaabta guriga, warshadaha quraaradaha, xoghaynta xogaha, iwm.
ledges.cel - Rugaha buugga iyo roogagga
Taageero velas.cel - noocyada kala duwan ee shumaca haysta
musqafka - armaajooyinka, kuraasta, kursiyada, iwm.
Iyada oo inta badan ka heli files by xulashada luqadda Ingiriisiga, walxaha waa u faa'iido badan ee af kasta iyo xitaa ka fiican yahay oo dhan soo shaqeeyay in cutubyo ka shaqeeya iyo saddex dimenciones waxaa si fiican shaqeeyay waxaad badbaadin ton waqti in la barbaro ....
Si aad u hesho kheyraadkan, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad u qorto adeega xulashada, waa lacag la'aan.
Post Previous«Previous AutoCAD Autodesk Autodesk Autodesk Autodesk Autodesk Autodesk Autodesk Autodesk
Post Next Ma rabtaa inaad kasbato $ 30 si aad u tijaabiso Topobase?Next »
2 Jawaab in "Xagee laga helaa Unugyada Microstation"
si qarsoodi ah isagu wuxuu leeyahay:
Hada, waxaan sidoo kale isku dayayaa inaan helo unugyo adigoo raacaya xiriirkaaga aanad tagin bogga Bentley. Waan jeclaan lahaa haddii aad isku xiri karto dhismooyinkaas sababtoo ah ma heli karo bogga Bentley midkood.
Chema isagu wuxuu leeyahay:
Juun, 2015 at
Waan ku faraxsanahay haddii aad la xiriiri karto goobta ay Bentley resources ku yaalaan. Anigu ma heli karo.